I-Jet Blue Airbus A-320 mega pak. Konke okungazelelwe .....
Umbuzo I-Jet Blue Airbus A-320 mega pak. Konke okungazelelwe .....
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #774 by spilok
Ngijabulele izindiza zeJet Blue A-320 Mega Pak ngezinyanga ezimbalwa manje. ZONKE ZESIFUNDAZWE, angikwazi ukusheshisa noma yimaphi ama-4's kusihle isivinini sokuphuma. Ziyavilapha, zihamba njengamafudu, futhi akukho engizamile ukubonakala kuzenza zihambe njengoba zazenza ngaphambili. Yini ebingashintsha? Ngiye ngabakhipha futhi ngabuyisela futhi, kodwa benza okufanayo.
Yini engingayihlola ukubona ukuthi yini edale ukuthi lokhu kuvila kwenzeke kuzo zonke izindiza ezikule pak? Ngiwalandile eRickooo aqinisekisa ukuthi akhona P3di-v4 ivunyelwe
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #779 by spilok
Ngikutholile. Kubonakala sengathi i-joystick yami ayilinganisiwe kahle kusuka ekufakweni kabusha kwami. Angizange ngilinganiselwe, bese ngiqala ukubuyela kokuzenzakalelayo ngokulungiswa. Ikalwe kabusha futhi wonke amandla ami asebuyile. Kubukeka njengokulinganisa kweTropottle kuqashelwe phezulu.